Visme: Ngwá Ọrụ Ike maka ingmepụta Ọdịdị Visual Awude | Martech Zone
Anyị niile anụla na ihe oyiyi bara uru otu puku. Nke a enweghị ike ịbụ eziokwu taa ka anyị na-ahụ otu n'ime mkparịta ụka nkwukọrịta kachasị egwu oge niile-nke ihe oyiyi na-aga n'ihu iji dochie okwu. Onu ogugu mmadu na-echeta nani 20% nke ihe ha guru ma 80% nke ihe ha huru. 90% nke ozi a na-ebute na ụbụrụ anyị bụ nke anya. Ọ bụ ya mere ọdịnaya anya jiri bụrụ ụzọ kachasị mkpa maka nkwukọrịta, ọkachasị n’ụwa azụmaahịa taa.
Chee echiche maka nke abụọ gbasara otu agwa nkwukọrịta anyị siri gbanwee n'afọ iri gara aga:
Anyi adighizi ekwu na o juru anyi anya; anyị na-eziga emoji ma ọ bụ GIF nke onye na-eme ihe nkiri kachasị amasị anyị. Ihe nlere: ochi Natalie Portman na eti “lol” ndi ozo.
Anyị agaghịzị ede na anyị na nnukwu ụlọ ọrụ na njem nke ndụ anyị niile; anyị na-a selfie:
Anyị anaghịzị ahụ mmelite ọkwa dị mfe, ederede dabere na ntanetị Facebook na Twitter; anyị na-ahụ vidiyo - ọbụlagodi ozi mgbasa ozi - were ngwaọrụ mkpanaka:
N’etiti mgbanwe ọdịnala a anyị bi na ya – nke ihe a na-ahụ anya abụrụla eze ọhụrụ nke ụwa ntanetị – ọ gaghị adị mma ịnwe multitool na-ahụ anya nke nwere ike ịrụ ọrụ niile siri ike nke ịmepụta ihe ọhụụ ọdịnaya maka anyị?
Ya mere, gịnị ka ị ga-eme? Họta onye na-ese ihe dị oke ọnụ ma ọ bụ jiri ọtụtụ awa na-anwa ịmụ otu esi eji sọftụwia ihe mgbagwoju anya? Nke a bụ ebe Visme batara na foto a.
Ngwaọrụ ihe eji eme ihe ọhụụ, Visme zuru oke maka ndị na-ere ahịa, ndị ọchụnta ego, ndị na-ede blọgụ, na ndị na-enweghị uru na-achọ ịmepụta ụdị anya niile maka mkpọsa ahịa ha na ihe mmụta.
Ka anyị leba anya n’ihe ọ na-eme na otu o nwere ike isi nyere azụmahịa gị aka:
Ihe ngosi na infographics mere ka ọ dị mfe
Na nkenke, Visme bụ ngwa dị mfe iji, dọrọ-na-dobe nke nwere ike inyere gị aka ịmepụta ngosi dị egwu na infographics n'ime nkeji.
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị iji otu ihe ngosi PowerPoint ochie ahụ, Visme na-enye ndebiri mara mma, nke nwere nkọwa dị elu, nke ọ bụla nwere nchịkọta nke mmịfe slide.
Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ihe ngosi data na-akpali akpali, nyocha ngwaahịa ma ọ bụ akụkọ ozi nke aka gị ma ọ bụ malitegharịa, enwere ọtụtụ ndebiri ndebiri iji họrọ site na ịmalite ụkwụ aka nri.
Ejiri ọtụtụ puku akara ngosi na ihe osise eserese, yana ọtụtụ nde onyonyo efu na ọtụtụ narị akwụkwọ edemede, Visme na-enye gị ihe niile ịchọrọ ịmalite ịmepụta ọrụ nke gị nke na-adọrọ mmasị-ihe ị ga-enwe obi ụtọ ịkọrọ na netwọkụ mmekọrịta gị na ndị ọbịa na saịtị ahụ.
Hazie ihe ọ bụla
Otu ihe mara mma nke na-arụ ọrụ na Visme bụ ike ọ na-enye ndị ọrụ iji mepụta onyonyo ọ bụla dijitalụ nke na-abata n'uche na mpaghara nhazi ya.
N'iji nhọrọ akụkụ omenala, ndị ọrụ nwere ike ịmepụta ihe ọ bụla, site na ndị ahụ dị oke mkpa memes hụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na mpempe akwụkwọ, ọkọlọtọ na akwụkwọ mmado ma ọ bụ ihe nkwado ọ bụla.
Tinye animation na mmekọrịta gị
Akụkụ ọzọ nke na-eme ka Visme dị iche na ndị ọzọ bụ ikike ya iji tinye animation ma ọ bụ mee ka mmekọrịta ọ bụla nwee mmekọrịta, dị ka a hụrụ n'okpuru otu n'ime ọrụ ndị ahịa anyị. Ma ịchọrọ itinye vidiyo, ụdị, nyocha ma ọ bụ ajụjụ na ọdịnaya gị, Visme na-enye gị ohere itinye ihe ọ bụla mepụtara na ngwa ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, ị nwere ike ịmepụta bọtịnụ ịkpọ oku iji rụọ ọrụ, dị ka a hụrụ n'okpuru, iji kpọbata ndị ọbịa na peeji ọdịda ma ọ bụ ụdị ọgbọ ndu.
Bipụta ma kesaa
N'ikpeazụ, ebe Visme sitere na igwe ojii, ị nwere ike bipụta ọrụ gị n'ọtụtụ ụdị ma kesaa ya ebe ọ bụla. Inwere ike ibudata oru ngo gi dika onyonyo ma obu faili PDF; ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-ahọrọ, i nwere ike embed ya n'ime gị onwe gị na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ blog; bipụta ya n’ onlinentanet ka ị nwee ike inweta ya n’ebe ọ bụla; ma ọ bụ ibudata dị ka HTML5 iji chee na-anọghị n'ịntanetị (n'ọnọdụ ebe ị nwere njikọ umengwụ ma ọ bụ na-enweghị Wi-Fi ma ọlị).
Nzuzo na nchịkọta
Enwekwara nhọrọ nke idobe ọrụ gị naanị site na ịgbalite nhọrọ nnweta Amachibidoro ma ọ bụ paswọọdụ na-echebe ha.
Nnukwu uru ọzọ: have nwere ohere ijikọ ọnụ ọgụgụ nke echiche na nleta na infographic gị n'otu ebe. Nke a ga - enye gị echiche ziri ezi banyere ọkwa itinye aka, ọkachasị mgbe ndị ọbịa kpebiri itinye akwụkwọ ozi nke gị na saịtị nke aka ha.
N'ihe karịrị ndị ọrụ 250,000, ọtụtụ n'ime ha nnukwu ụlọ ọrụ dịka Capital One na Disney, Visme n'oge na-adịbeghị anya malitere otu atụmatụ iji nyere ndị ọrụ aka ịmekọrịta na arụmọrụ nke ọma, ma n'ime na n'èzí nke òtù ha.
Ihe kachasị mma bụ na Visme bụ n'efu maka onye ọ bụla chọrọ ịmalite ịmepụta ọdịnaya anya na ngwaọrụ ndị eji emepụta ihe. Maka ndị chọrọ ịmeghe ndebiri ndebiri ma nweta atụmatụ ndị dị elu, dịka ngwa ọrụ na nchịkọta, atụmatụ akwụ ụgwọ na-amalite na $ 15 kwa ọnwa.
Gụkwuo Banyere Visme Otu Debanye aha maka Akaụntụ Visme gị n'efu
Ngosipụta: Abụ m a Onye mmekọ Visme na m na-eji onye òtù ọlụlụ njikọ m na edemede a.
Tags: buttonkpọọ ka emeeserese eseresechaatịctainfographic ngwá ọrụNgwaọrụ instagramihe ngosivismeọdịnaya anyavisual ọdịnaya n'elu ikpo okwuọdịnaya weebụ
Nayomi Chibana bụ onye nta akụkọ na onye ode akwụkwọ VismeVislọ Ọrụ Ọmụmụ Ihe Anya. O nwere MA na Journalism na Media si Mahadum nke Hamburg na Germany ma bụrụ onye nchịkọta akụkọ nke ndị ndu Latin American na-eme nyocha nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo ọtụtụ afọ. E wezụga na-eme nnyocha na-adịbeghị anya na ọnọdụ na mmekọrịta mmekọrịta longform mmekọrịta, ọ hụrụ n'anya na-eme njem na-amụ banyere ndị ọzọ na omenala.
2Checkout: Nyochaa ịkwụ ụgwọ gị na ụwa iji bulie ego